Ekleziolojia - Wikipedia
Ny ekleziolojia na eklesiolojia dia sampan'ny teolojia kristiana izay andalinana ny anjara asan'ny Fiangonana amin'ny maha vahoakan'Andriamanitra azy eo amin'ny tantaran'ny famonjena ny olombelona. Ny ekleziolojia dia fandalinana ny fiandohan'ny kristianisma, ny fifandraisany amin'i Jesoa, ny anjara asa sahaniny eo amin'ny asam-pamonjena, ny fandaminana misy ao aminy, ny fitsipika mifehy azy, ny zava-kendreny sy ny tanjony ary ny fitantanana azy.
Misampana maro ny fivavahana kristiana ka noho izany dia misy karazany maro koa ny endriky ny ekleziolojia arakaraka ny fiangonana. Mandalina koa ny fiantraika sy ny fivoaran'ireo fiangonana izay nanjary ho Fiangonana amin'ny maha andrin'ny finoana azy koa ny ekleziolojia. Mifandray akaiky amin'ny teolojia pastoraly io sampan'ny teolojia kristiana io.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ekleziolojia&oldid=980229"
Dernière modification le 28 Janoary 2020, à 09:04
Voaova farany tamin'ny 28 Janoary 2020 amin'ny 09:04 ity pejy ity.